Maalinta: 25-ka July, 2019
Hilal Bandırma Line Km: 70 + 355'de Nif Bridge iyo Km: 73 + 31 Gediz Bridge waxay ku taalaa wadada saxda ah kadib dib u habeyn lagu sameeyay khadadka la taaban karo ee la xoojiyay ee wadada saxda ah ee Jamhuuriyadda Turkey Dhismaha Xarumaha Koronto [More ...]
TUVASAS Kala-beddelka Muujinta Dabaqyada Kala Duwan ee TUVASAS
Kala duwan TÜVASAŞ uu saqafku Dhismaha Bedelida natiijada daahan ee curdan TÜVASAŞ Turkey baabuur Industry Agaasinka (TÜVASAŞ) 2019 / 316471 2.040.345,37 JCC tirada xadka qiimaha halkii TÜVASAŞ iyo kharashka ku saabsan S $ 2.671.151,67 Kaladuwan [More ...]
Wasiirka Turhan: '133 Bilyan oo Bilyan Maalgashiga Tareenka'
Khudbaddiisii ​​uu ka jeediyay Shirka Golaha Dhaqanka ee Istanbul (Luulyo) Shirka Golaha Guud, Wasiirka Turhan wuxuu ku sheegay in, isgaarsiinta, gaadiidka, kaabayaasha iyo mashaariicda, kuwaas oo ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee dhaqaalaha, ay muhiim u yihiin tartanka adduunka iyo warshadeena. [More ...]
Dekadda Ordu Deco
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu baaritaano ku sameeyay Dekadda Ünye kahor diyaarinta “unannye Port Project bulunan, kaas oo kamid ah mashaariicda aragtida ee Ordu. Adeegsiga ciidan ee badda oo aad u badan iyo dhaqaale-bulsho, dalxiis [More ...]
Xalinta Isbitaalka Magaalada Ankara ee Magaalada Ankara ee loo yaqaan 'EGO Solution' dhibaatadii gaadiid. Si loo helo gaadiid toos ah oo laga keeno bartamaha magaalada lana dhigo Isbitaalka Magaalada Ankara ee Bilkent, kaas oo maalin walba kumanaan bukaanno ah iyo eheladooda ah lagu martiqaado, Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara “112 [More ...]
Turkey bilaabay guud ahaan "dadka lugta ah codsiga ugu horeysay" ee magaalada Ankara, iyadoo sidoo kale taageerada codsiyada cusub ee Ankara degmada Metropolitan bilowday waa mid cajiib ah oo ku saabsan wacyiga bulshada. Si loo soo jiito dareenka ahmiyadaha dadka lugaynaya ee taraafikada, wadada caasimada [More ...]
Mashruuca Sakarya ee Magaalo-weynaha ee taraafikada 'Koontaroolka midig loo leexiyay' ayaa bilaabay inuu hirgalo. Wajahadan dhexdeeda, isgoysyo kala duwan oo 25 ah oo kuyaala xuduudaha Sakarya iyo ugu dambeyntii isku xirka Korucuk iyo Xarunta Magaalada [More ...]
Biraha korantada ee casriga ah waxaa dhistay Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli oo ku taal Isgoyska Köseköy Bridge, kaas oo xiriir la leh xarunta degmada Kartepe isla markaana qaada gaadiidkaga wadada isku xirta Istanbul - Ankara. Waaxda Sayniska [More ...]
Mehmet Çöplü, oo ka shaqeyn jiray sidii chauffeur u ahaa 2.5 ee GaadiidkaPark A.Ş. digniin [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir, Wasaaradda Arimaha Gudaha 'Ololaha Mudnaanta Mudnaanta ee Lugeeyayaasha' ayaa bilaabay inay calaamadiyaan dhulka. 170 dhibco gaar ah, 'Sawirka lugta hore' Sawirka, kaas oo lagu dabaqey iskuulada iyo isgoysyada dadka lugeynaya, ka dib degmooyinka dhexe [More ...]
Go'aanka ku Saabsanaanta La Qaadashada Qaadashada Waxyaabaha La'aanta ah ee Qaar ka mid ah Agaasinka Guud ee Wadooyinka (Tirada Go'aannada: 1359) 25 waxay dhaqan gashay ka dib markii lagu daabacay Jariidada Rasmiga ah ee taariikhaysan July 2019. Si toos ah ula xiriir Anka [More ...]
Halkalı Kulan Macluumaadka Mashruuca Tareenka ee Kapıkule
Halkalı Shirka Macluumaadka Mashruuca Tareenka ee Kapıkule: Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun Halkalı Khadka Tareenka ee Kapıkule wuxuu ka qeybgalay kulanka macluumaadka ee mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya. 54 Km ee gobolka Edirne [More ...]
Marxaladda ugu dambeysa ee Mashruuca Tareenka Sare ee Antalya
Marxaladda ugu dambeysa ee Mashruuca Tareenka Sare ee Antalya ayaa la gaarey. Mawduuca tareenka, oo laga wada hadlay Antalya sanado badan, ayaa lagu soo daray mashaariicda tareenka xawaaraha sare ee dowladda.Waxaa jira laba khadad xawaare sare ah oo Antalya ku xiri doona Anatolia. Mid ka mid ah Eskisehir [More ...]